Iinyanga zeenkwenkwezi zenyanga - Ukuvumisa Ngeenkwenkwezi
Fumanisa ukuba yeyiphi le nyanga ikumisele umqondiso wakho kwimicimbi yothando, ubomi bosapho, ubuhlobo, umsebenzi kunye nokuba sempilweni kwakho.
Kude kube ngumhla we-15, uluncedo kwaye uyakhathala, uhambisa isisa sakho kwabo udibana nabo kubomi bakho bemihla ngemihla. Emva koko, iVenus eLibra ikusondeza kwiqabane lakho. Inyanga epheleleyo nge-22 ikulethela iindaba ezimnandi okanye ukudibana kobuhlobo.
Ekuqaleni kuka-Agasti, iLanga neMercury zithanda i ulawulo olululo lwemicimbi yakho ebonakalayo kunye neyezemali. Ngomhla wesibhozo, iNyanga eNtsha ikubuza ukuba ucacise impumelelo yakho. Eli lixesha lokuthatha uhlahlo-lwabiwo mali lwakho ukuze ulawule ngcono.
Nokuba awunasizathu emsebenzini, kubomi bakho bemihla ngemihla, kufuneka uzilolonge. Ukuba useholideyini, thatha ithuba lokuqalisa umdlalo omtsha. Le nyanga inelanga ikunika ulonwabo kunye neemvakalelo, ke thatha ithuba lokuphumla onikezelwa lona!
Fumanisa iimfihlo zempumelelo yakho.
Ukubona i-01: Ihora le-Mirror lithetha ukuba umntu uyakuthanda ngokufihlakeleyo
Kutheni le nto iPlanethi yeVenus ibaluleke kangaka kwiNkwenkwezi?
indlela yokulukuhla umntu we-sagittarius ngesondo
Ingelosi inombolo 5 enentsingiselo
ngubani inombolo 4
Inombolo yomnxeba engama-555 555
Ngaba sagittarius kunye nomhlaza ziyahambelana